Umhlahlandlela weBlackjack | Dlala i-Blackjack yamahhala (Akukho Ukudawuniloda Futhi Ayikho Idiphozithi Edingekayo)
Ikhaya / Imihlahlandlela / umhlahlandlela wegeyimu i-blackjack
Umhlahlandlela Wegeyimu i-BlackJack
Ikhasino eliku-inthanethi i-Blackjack ngumdlalo wetafula wakudala otholakala ezindaweni eziningi ezinhle kakhulu zekhasino. Umdlalo uyinganekwane ngenxa yesithinzu sawo njengomdlalo owodwa lapho ungashaya khona indlu.
Emdlalweni wekhasino eliku inthanethi i-Blackjack, udlala nomthengisi – isandla sakho simelane nesakhe. Ukunqoba umdlalo, kufanele udonse isandla ngenani eliseduze elingu-21 ngangokunokwenzeka ngaphandle kokweqa le nombolo. E-Blackjack, wonke amakhadi abhekwa njenganenani lobuso bawo, futhi wonke amaRoyals anenani elingu-10.
Uma udlala isandla seBlackjack, kuyadingeka ukuthi ubheje ngaphambi kokuba kuqale isandla. Imvamisa ume ukunqoba imali yakho ephindwe kabili, kepha amathuba okuba no-3: 2 awajwayelekile kulo mdlalo. Umthengisi uzokuphathisa amakhadi amabili, abheke phezulu, namabili azenzele wona. Kuvulwe ikhadi elilodwa kuphela lomthengisi, noma kunjalo. Kepha leli khadi likunikeza inkomba yokuthi yini umthengisi angabe eyiphethe.
Uhlanganisa inani lamakhadi akho, bese uthatha isinqumo ngenkambo yesenzo. Izinketho zakho yilezi:
Ukukhetha ukushaya kusho ukuthi ucela umthengisi ikhadi elingeziwe. Ufuna ukwenza lokhu kuphela uma inani lesandla sakho liphansi kakhulu. Ungashaya izikhathi eziningi ngendlela othanda ngayo, kepha ukushaya lapho isandla sakho sesivele sinenani elingaphezu kwe-15 kuthwala ubungozi bokuphokophela inani elingaphezu kuka-21 – noku tholwa.
Uma uhlukanisa, ungakhetha ukuhlukanisa isandla sakho sibe yizandla ezimbili ezihlukene – kepha futhi kuzodingeka ukhokhe ekubhejeni okungeziwe kwesandla esisha. Ikhadi ngalinye lokwehlukaniswa lizobhekelwa njengelinye ikhadi ukuze lenze isandala esigcwele, bese ulidlala njengokujwayelekile ngokumelene nesandla esisodwa somthengisi.
Ukuphinda kabili kusho ukuthi uphinda kabili ukubheja kwakho, bese ushaya futhi. Awukwazi ukushaya futhi. Ngokuvamile, kuphephile ngo-100% ukubiza ukubheja kabili uma isandla sakho sinenani elingu-11, ngoba inani eliphakeme lekhadi elisha lingu-10. Kodwa-ke, ubeka engcupheni yokuthola ikhadi elinenani eliphansi futhi ungakwazi ukushaya futhi .
Ukuma kusho ukuthi awusafuni amanye amakhadi – ujabulile ngesandla sakho ngendlela esiyiyo. Uma usuthathe isinqumo sokuma, kuyithuba lomthengisi lokudlala. Baqala ngokudalula ikhadi labo elifihlekile.
Uma bengakushayi, khona-ke imithetho yomdlalo idinga ukuthi umthengisi afike kuHit. Umthengisi kufanele aqhubeke nokushaya kuze kube yilapho bekushaya noma behamba phambili. Kodwa-ke, umthengisi kumele ame ku-17, okukunikeza inzuzo encane. Esinye isimo lapho umdlalo uphela khona ukuthi ngabe isandla sakho nesandla somthengisi kunenani elifanayo ncamashi; lokhu kwaziwa ngokuthi yi-Push. Lapho kwenzeka i-Push, ukubheja kwakho kuyabuyiselwa.